I kwekhulu lamashumi amabili nanye, leso esiye saletha nalo ubuchwepheshe obusha usize ukuletha ekuphileni okusungulile ngaphambili engenakwenzeka futhi engavamile. Ukutholakala kwalezi zinto zihlanganisa:
I-retina inezinhlobo Artificial;
ukusetshenziswa khamera Pop;
digital synthesizer amaphunga;
ophendulayo ephathekayo zasemkhathini;
Njengoba sekudlule ingxenye encanyana kwekhulu lesihlanu, cishe ngaphambi elinde ezisunguliwe engavamile iningi lesintu, yakhelwe futhi lakhiwa esikhathini esizayo. Kuze kube manje, izinto ezintsha evulekile ibonise up okuyinto kwafinyelela intuthuko kwezobuchwepheshe kanye lokho ngaphambili amathuba nhlobo ingakwazi abantu.
Ake sicabangele ezinye okusungulile engavamile yomuntu, wadala ngasekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili nanye.
I-retina inezinhlobo Artificial
Tholile fanele usosayensi Japanese. I-retina inezinhlobo Ikhishwa kuyinto-matrix aluminium, lapho zisetshenziselwa izakhi Semiconductor eyenziwe silicon. Ukulungiswa kuyinto Amaphikseli 100.
I-retina uyogcwalisa umsebenzi wayo uma ifakiwe ephelele ngezibuko akhethekile ikhompyutha encane. Amaphuzu nge edidiyele isiqophi ikhamera esetshenziswa ukuthola bese bedlulisela ikhompyutha isithombe lapho ukucubungula kwenzeka. izibuko ikhamera iguqula ukukhanya ku-elekthronikhi pulses izingxenye. Ngemva ikhompyutha processing image uhlukanisa ke ngesigamu, futhi adlulisele iso kwesokunxele nokulungile radiators infrared zitholakala ngemuva lens lithatha isikhwama sezibuko. Amaphuzu ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana pulses esifushane ukukhanya infrared, okuyinto oyenza isebenze photocells kuyi-retina kanye ebangela ukuba adlulisele amaza kagesi encode isithombe izinzwa optical.
Ngokuzayo sihlelwe ukuthi i-retina yeso enjalo Ungayibuyisa amehlo endoda eyimpumputhe, futhi uzobona izinto ezincane.
Kamuva, ososayensi Japanese bakwazi ukhule-retina kusuka stem cells amagundane, ukuhlolwa yayo asikapheleli.
Ngokuhamba kwesikhathi, zikhona zonke izinto ezintsha futhi esisha. okutholakele UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki zikhona ukuphila komuntu, omunye wabo - it is a ikhibhodi lelivakalako.
Ngosizo lwawo kungenzeka ukwakha ukhiye kwamanzi, lapho kukhona cindezela yabo. Isiqophi wokudlala ukuthi yena uqagula ikhibhodi, has a inzwa ukuthi ungakwazi ukulandelela ukunyakaza neminwe, abese sinquma izixhumanisi okhiye agxishiwe isibonisi ikhombisa lesifanele othayishiwe umbhalo. Nokho, lokhu ikhibhodi ezinye ukulinganiselwa, ingasetshenziswa hhayi ngaphandle.
Lokhu okwatholakala isazi Chinese, ngemva kokuba uyise ebulawa umdlavuza wamaphaphu. umlutha kagwayi - kwezinkulumo ezinamandla kakhulu emhlabeni. Yini akazange enze abantu ukuyeka ukubhema. Uzama esikhundleni ukuthi umkhuba nge okunye, isibonelo, glues -nicotine patch, othenga gum, uzama ukuthola elinye ithuba ukubhema.
Electronic ugwayi - kudivayisi ngumkhiqizi eqoqa inqubo ukubhema. Ukusebenzisa izindaba ezinjalo wenze indoda ingamniki lo mkhuba, akuyona ufuna esikhundleni, kodwa ngokuvamile uchitha isikhathi. Nokho, umuntu obhemayo akusho konakalisa emaphashini akhe ezinesihlungu resin kanye amandla omlilo imikhiqizo njengoba bengekho kulolu hlobo idivayisi. Ngakho, umuntu ebhema i ugwayi electronic ungakwazi balahle umlutha kagwayi.
kokusungulwa UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki kwekhulu lama-21 zahlukahlukene kakhulu, futhi omunye wabo - ubuchopho esibonakalayo.
Isibonelo ukulawula into yokucabanga oluye lwaboniswa inkampani Japanese. Indoda umcabango wenza inkinobho ukushintshela esikalini imodeli isitimela ujantshi.
Isimiso: e bohlu infrared kwenzeka translucence nokushutha cortex cerebral. Ekuqhubeni inqubo enjalo bubonakala ngokucacile edabula izitsha njengoba hemoglobin ne-oksijini, futhi ngaphandle, ukuthi ibonakale futhi umthamo wegazi ezindaweni ezahlukene ingqondo. umshini Izinguquko ezinjalo, ngakho kudingeka voltage amasignali ukuthi uphathe kumadivayisi angaphandle. kwenzeka Ngakho ukulawula isitimela inkinobho.
Le phrojekthi kulindeleke ukuba sifinyelele ukuqaqwa eyinkimbinkimbi ngaphezulu izinguquko ubuchopho bomuntu. enza isignali irisidi kuyoba phezulu esibonakalayo indoda-mshini.
Digital synthesizer amaphunga
Namuhla omunye ngeke umangale 3D-sound futhi 3D-vidiyo. Namuhla okusungulile zithandwa kakhulu. ubuchwepheshe Fancy ekuphileni kwethu ekuqaleni kwekhulu lama-21. Inkampani French kuyisinqumo we digital wokulinganisa iphunga. Ukuvela izinto ezintsha enjalo iye yaletha ezihlukahlukene "ukuphila digital" emphakathini. Ukwehlukahluka kwezimangaliso amaphunga uzobe kuhlelwe kusukela cartridges. Lokhu kuzonezela elikhuhluziwe ukubuka ama-movie isiqophi imidlalo.
Ingabe iyafana inki electronic. Ulwazi uboniswa ukubonisa okukhethekile. Le e-izincwadi usebenzisa iphepha electronic, njengoba siyasebenza nakwezinye izici. Uyinki Electronic ekukhanyeni kubonakala Ungabonisa ihluzo nombhalo isikhathi eside, singachithi isikhathi sethu amandla amaningi.
Izinzuzo lokhu ephepheni:
Lolu hlobo Ukufundwa akusho ukulayisha amehlo njengoba iphepha plain, futhi ngenxa yalokho ngeke kuyilimaze umbono womuntu.
iphepha Electronic zingabonisa ividiyo imvamisa of 6 ngesekhondi, ngokuvumelana 16 shades of gray.
Work kuchutjekwa nekwenta ncono futhi ukwandisa kule isivinini okusungulile isibonisi.
Umgomo we operation sedivayisi onjena ukulisebenzisa amakhamera amabili, kwakheka isithombe nge okuyinto futhi uma kuqhathaniswa. Nale isithwebuli ukudala i ngqo imodeli ezintathu-ntathu of izakhiwo ezidingekayo. Babonakala nge ukunemba esiphezulu izingxenye ezihlukahlukene. Imininingwane idluliselwa ku zezibalo, ikhompyutha ifomu digital, idlulisa idatha kwi isayizi, simo, umbala into eziskeniwe.
Ukusebenzisa izilungiselelo ukulawula isithombe kukhompyutha awenziwanga. Yonke idatha ziyahlaziywa, futhi umfanekiso luvele esibukweni kakade isikhala ezintathu-ntathu.
Omunye izinkampani Chinese kwekhulu lamashumi amabili nanye, wethulwa izilaleli izinti "smart". Ingqikithi yale okusunguliwe ukuthi umbhapathizo izinduku e ukudla esikrinini igajethi ngalo isicelo efiselekayo, eqoshiwe ulwazi izinga lokudla. Lokho kwehlisa, isibonelo, izinduku uwoyela, uzobona umlayezo esikrinini "okuhle" noma "kubi" esekelwe izinga lomkhiqizo ohlolwayo.
Ukukhipha yasungulwa ezinjalo ososayensi kwaphoqa isimo imikhiqizo e-China. Izwe ukwambulile eziningi izifo ngenxa ukusetshenziswa ukudla eliphansi e ukudla. imikhiqizo ngokuvamile okulungiselelwe kwenye namafutha efanayo ukuthi kuphakamisa ezinobuthi therein.
izinti "Smart" angabonisa:
lokushisa kwamanzi emigodini;
inani kilojoule izithelo.
Abakhiqizi bayahamba ukuze sandise amathuba izinti, ngosizo lwabo kwakunokwenzeka ukuthola inombolo enkulu izinkomba ukudla. Lokhu okusungulile ingakamiswa zakhishwa itholakale ukudayiselwa ngoba kuze ekukhiqizweni kusaqhubeka.
Namuhla, ososayensi abaningi bafuna ukwakha nano-amarobhothi - imishini ukuthi bangasebenza amazinga atomic yamangqamuzana ezinto eziphilayo. Lokhu okusungulile uzokwenza ukuba kunyatheliswe izinto yamangqamuzana ezinto eziphilayo. Kuyoba lula, isibonelo, ukwenza i-oksijini noma amanzi. Futhi, ezinhlakeni zikahulumeni kwezomnotho, bazokwazi ukwakha ukudla, okokubasa kanye nezinye izinqubo oluhilelekile ekuhleleni umsebenzi womuntu. Lezi amarobhothi bazokwazi ukwakha self yabo.
I-Nanotechnology iwuphawu esizayo futhi njengoba Vector yentuthuko impucuko. Ukusebenzisa kwabo kungenzeka cishe yonke imikhakha yempilo yomuntu.
Kwezokwelapha, ukuvela nano-amarobhothi kuzoholela ikhambi eliphelele zomzimba womuntu. Bangakwazi iyangena emzimbeni. Kahle imishini ehlelwe uyobhubhisa amagciwane kanye nezinye izinto eziyingozi ngaphakathi emzimbeni. Ukusebenzisa i-nanotechnology anganika isikhumba womuntu enhle futhi unempilo.
Ngo ngemvelo imishini electronic ukusiza ukumisa nokungcoliswa emhlabeni. Ngosizo lwabo, sizokwazi lokufeza ukuhlanzwa amanzi, umoya kanye neminye imithombo esibalulekile empilweni yomuntu.
okusungulile okunjalo engavamile wesintu ongalwenza ukusiza ukuxazulula izinkinga eziyinkimbinkimbi, kodwa ngalesi sikhathi yentuthuko kukhona phezu ucwaningo nentuthuko esiteji.
Kuze kube manje, wadala ezinye izingxenye ikusasa imishini yamangqamuzana, elibamba ezihlukahlukene izingqungquthela enikelwe udaba yokudala nanorobots.
Kukhona prototypes bakudala izimoto esizayo. Ngo-2010, ngokokuqala ngqa ikhombisa imishini yamangqamuzana esekelwe DNA Ungahambisa emkhathini.
I-Nanotechnology ezweni akusho yima, mhlawumbe kwekhulu lama-21 kuyoba ekhulwini ngisho negama, okuzoba kokusungulwa lebanti.
Ikhulu entsha yaletha zokuxhumana virtual, ukuphola, imidlalo. Indoda yakha khathizwe sakhe, kudala Amakhasi ayo abonakalayo Okwezwe amanethiwekhi omphakathi. Ngakho-ke singasho ukuthi ukusungulwa okungavamile, ngezandla zabo siqu - lokhu yokuxhumana.
Ukuthuthukiswa ubuchwepheshe kuholela ukwehla ngo emihlanganweni langempela futhi ithambekele kakhudlwana ukuxhumana ebonakalayo.
New okusungulile virtual, izici engavamile ezisiza umuntu ukuzivumelanisa umphakathi virtual - kuyinto:
Facebook - yokuxhumana lapho abantu bangaxhumana umhlaba wonke. Yabelana ngezithombe ne-videonovinkami, xoxa, ukweluleka, ubatshele amaqiniso izithakazelo ezahlukene.
Oculus Rift - iwebhusayithi esizinikezele isiqophi imidlalo.
Apple iPhone - ifoni ukuthi ine-inthanethi. Kungenzeka futhi ukuba ubuke ama-movie, ukulalela umculo, ukuthwebula izithombe, ifilimu. Ifoni nezinye izici eziningi ewusizo, kuhlanganise zakudala: kokuxoxa nabangani.
Amazon Kindle - umtapo electronic izincwadi.
Inventions eziwubuwula futhi uhlakaniphile, ewusizo hhayi. Nokho, ngokusungulwa kwesibonakhulu emhlabeni engavamile ngcono njalo ngonyaka, phakathi kwabanye ukuthuthukisa. Humanity izama ukuqamba into engavamile ezokwenza kusimangaze wonke umuntu. Lokhu eseyintsha kufanele ulethe ezimpilweni zabantu lula, kalula into ukuphila komuntu.
Ikhulu lama-21 Futhi kuyoletha nezinto ezintsha, ikhono elingavamile esintwini bazokwazi ukuthuthukisa indawo ngaphambili nhlobo futhi ukuthola ulwazi olusha.
Lesi sikhunta emlonyeni: izimbangela kanye nokwelashwa